Kodzero-dzevanhu, 12 Gunyana 2019
China 12 Gunyana 2019
Gunyana 12, 2019
VaLeo Mugabe Vanoti Sekuru Vavo Vachavigwa neHama Dzavo
Muzukuru mukuru wevaimbove mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, anoti semhuri wakawirirana kuti mutumbi wasekuru wavo uchaivigwa nehama dzavo pahurongwa husina hurumende.
Hama dzaVaMugabe Dzinoti Dzingafare Zvikuru Kana Vakavigirwa Kumusha
Hama neshamwari dzevaimbove mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, idzo dzakaungana kwaKutama, dzinoti dzinofara zvikuru kana mutumbi waVaMugabe ukavigwa kwaZvimba kumusha kwavo.
Vanhu Vanokuvara Vachida Kuona Mutumbi waVaMugabe
Vanhu vakawanda vakuvara kunhandare yeRufaro meshure mekunge zviuru zvevanhu zvatsikirirana zvichimhanyira kundoona mutumbi wevaimbove mutungamiriri wenyika, VaRobert Mugabe, munhandare yeRufaro.
VaMugabe Vovigwa neMhuri Yavo, Kwete neHurumende?
Vaimbova mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, havasi kuzoradzikwa kumarinda eHeroes Acre mushure mekutadza kuwirirana pakati pehurumende nemhuri yavo. Mhuri yaVaMugabe yarambawo kuzivisa veruzhinhi kuti vacharadzikwa kupi uye riini.
Gunyana 11, 2019
Vamwe Vanorwira Kodzero Vanoti Havaregereri Zvakaipa Zvakaitwa naVaMugabe
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Diaspora for Democracy, VaCharles Mutama, vanoti vanorwadzikana zvikuru nekushungurudzwa kwavakaitwa nehurumende yaVaMugabe.
VaMnangagwa Vanorumbidza Major General Mugoba Vachivaviga kuHeroes Acre
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vaviga gamba renyika, Major General Trust Mugoba, vachiti kushaya kwavo, pamwe nekushaya kwevaimbove mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, kwasiya nyika yarasikirwa zvikuru.
Mutumbi waVaMugabe Unosvika muZimbabwe
Mutumbi waVaMugabe wasvika muHarare uchiperekedzwa nemudzimai wavo, Amai Grace Mugabe, avo vange vakafuka jira dema.
Vamwe Vari Kunze kweNyika Vanoti Vakatiza Munyika Nekuda kwaVaMugabe
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakasiyanasiyana zvinoti zvakamanikidzwa kubuda munyika nekuda kwehutongo hwaVaRobert Mugabe, avo vazvinoti vaitonga nedemo.
Gunyana 10, 2019
Madzishe ekwaZvimba Anoti Hurumende Ndiyo Ichatungamira Zvirongwa zveKuvigwa kwaVaMugabe
Mutauriri wemadzimambo edzinza raVaMugabe, Mambo Katizagombo, avo vanonzi Gibson Jenami, vati hapachisina makakatanwa pamusoro pekuvigwa kwaVaMugabe sezvo hurumende, ichitungamirirwa naVaEmmerson Mnangagwa, yave pamberi pezvose zvichaitwa.
Mutumbi waVaMugabe Wotarisirwa Munyika neChitatu Masikati
Mutumbi wevaimbove mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, uchasvika muHarare neChitatu masikati uye ndipo pachaziviswa hurongwa kwekuradzikwa kwavo.
Gunyana 09, 2019
Amai Dongo Vokurudzira Kuremekedzwa kweChido ChaVaMugabe Pakuti Voradzikwa Kupi
Vaimbove murwi werusununguko uye vakamboshanda nevaimbove mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe amai Margaret Dongo vanoti hazvishamise kuti hapana kujeka parizvino kuti vaMugabe vacharadzikwa kuti sezvo bato reZanu PF rine mutemo wekuti anenge apanduka haaradzikwe kuHeroes acre.
Vagari VemuHarare Vokurudzirwa Kufashaidza Mvura Yavanonwa Kudzivirira Manyoka
Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti vagari vemuHarare vanofanirwa kugara vakafashaidza mvura yavanomwa mudzimba kuitira kuti vasabatwe nezvirwere zvemanyoka izvo zviri kubata vanhu vakawanda muguta iri sezvo vanhu vasiri kuwana mvura yakachena nguva dzose.